Sannad ka dib heshiiskii Farmaajo iyo Uhuru ee furitaanka xudduudda maxaa ka hirgalay? - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka KDF
Image caption Guddiga difaaca barlamaanka kenya oo booqday xadka.
Dowladda Mareykanka ayaa ciidammada Kenya ugu deeqday hub iyo gawaarida gaashaaman, si ay ugu adeegsadaan howlohooda ku aaddan sugidda ammaanka xuduudaha. Qalabkan Milatari ayaa loo adeegsan doonaa ka hor tagidda iyo la dagaallanka xubnaha ka tirsan Al Shabaab ee dhaqdhaqaaqyada ka sameeya deegaannada u dhow xadka.
Kevin Balisky oo ah Sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka Mareykanka ayaa munaasabad saanaddaas lagu guddoonsiiyay taliska ciidanka Kenya oo ka dhacday Nairobi ka yiri: "Qalabkan wuxuu caddeyn u yahay sida ay dowladda Mareykanka mar walba diyaar ugu tahay iney garab istaagto Kenya, si ay u xoojiso howlaha lagu la socdo dhaqdhaqaaqyada Al Shabaab ee xuduudda.
Iyadoo taasi ay jirta ayaa hadana ilaa iyo iminka aysan waxba ka hirgelin heshiis muddo hal sano iyo bar ah ka hor ay isku afgarteen mas'uuliyiinta dowladaha Kenya iyo Soomaaliya oo ahaa in la furo xadka u dhexeeya labada dal, waxaana taasi bedelkeeda Kenya ay bilowday inay sii xoojiso ammaanka soohdinta.
Markii uu madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo booqashadiisii ugu horreysay ku tagay magaalada Nairobi, 23-kii bishii Maarso ee sannadkii 2017-kii, waxay isaga iyo dhiggiisa Kenya Uhuru Kenyatta isku waafaqeen in waji cusub loo furo iskaaashiga labada dal, isla markaana laga shaqeeyo hirgalinta arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen sugidda ammaanka, furitaanka xuduudda, billaabidda duullimaadyada tooska ah ee magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi iyo arrimo kale oo ku saabsan hagaajinta xiriirka labada dowladood.
Ilaa iyo hadda laguma guuleysanin in lagu dhaqaaqo tallaabada ku aadan furitaanka xadka, iyadoo rajo weyn laga qabay iney taasi xoojin doonto fursadaha ganacsi iyo isu socodka labada bulsho ee ku dhaqan magaalooyinka saaran soohdinta.
Arrinta ugu weyn ee hortaagan ayaa la rumeysanyahay iney tahay xaaladda ammaan oo aan wali si buuxda gacanta loogu qabanin.
Dhacdooyin amni darro oo xadka laga soo tabinayay ayaa waxaa ugu dambeeyay weerar maalin ka hor ka dhacay meel u dhow xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, halkaasoo lagu afduubtay haweeney u dhalatay Talyaaniga oo ka shaqeyneysay gargaarka.
Mas'uuliyiinta Kenya ayaa aaminsan in darbiga laga dhisayo soohdinta kala qeybisa labada dal uu wax weyn ka qaban karo howlaha sugidda amaanka, si looga hor tago kooxaha hubeysan ee weerarrada ka geystay gudaha Kenya.
Darbigaas ayaa ilaa hadda lagu xiray dhul gaaraya 20km, inkastoo uu hakad galay.
Al shabaab ayaa la tuhunsanyahay iney falal amni darro ka geystaan deegaanno ka tirsan Kenya oo u dhow xadka Soomaaliya.
Image caption Ciidammada Kenya
Maxaa hor taagan in xadka la furo?
Rajadii laga qabay in dib loo furo xadka ayaa u muuqata mid mugdi sii galeysa, shacabka labada dhinac ee ay arrintaasi khuseyso ayaana isweydiinaya halkii uu ku dambeeyay heshiiskii madaxda labada waddan ay ugu gogol xaarayeen in arrintaas la hir galiyo.
Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo loo yaqaanno Cabaas, oo ah Suxufi ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa BBC-da uga warramay fikirkiisa ku aaddan sababaha hor taagan in ugu dambeyn xadka la furo.
"Caqabadda ugu weyn ee aan suurta galineynin in la furo xuduudda waa amni darrada. Dowladda Kenya waxay mar walba waxay caqabad kala kulantaa dhibka uga imaada xadka, iyadoo uu xiranyahay, marka waa shey mustaxiil ah in lagu deg dego, oo iyadoo cilladaas jirto xadkii la sii furo, waayo waxaa iska muuqata in amni darrada ay kasii xumaan karto sidii hore", ayuu yiri.
Dhinaca kale wuxuu ka hadlay baahida loo qabo in dhinaca Soomaaliya laga helo gacan.
"Howsha waxay sahlanaan lahayd haddii dowladda Soomaaliya ay leedahay ciidan xoog leh oo ammaanka ka xaqiijiya dhinaca Soomaaliya, si looga war qabo cidda soo gudbeysa. Laakiin mar haddii aysan taasi jirin wey adagtahay in tallaabadaas xilligan la qaado waxayna horseedi kartaa khatar ka weyn midda haatan jirta".